Ka hor PCBfuture.com waxay si dhakhso leh u bixisaa shirkii pcbAdeegyada, macaamiil badan ayaa had iyo jeer noo sheegta inay ka heli waayeen lammaane isku-dhafan kombuyuutar lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay adeegga leexinta degdegga ah. Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee soo waajahaa waa:
a. Shirkado badan ayaa rabay inay bixiyaan adeegyo isugu imaada qalabka korantada maxaa yeelay qadarka dalabku wuu yar yahay.
b. The shirkadaha isku xidhka elektarooniga ma dalban karin dhammaan qaybaha loo baahan yahay isla halbeegga.
c. Waxay heli kari waayeen shirkadaha raaca PCB-ga kharashka yar marka la barbar dhigo isku-darka noocyada PCB-yada laftooda
d. Soo saaraha PCBA ma uusan aqoon xirfad ku filan, kumuu soo ururin karin wax soo saarkooda tayo sare leh.
PCBfuture.com waxaa looga dan leeyahay in la soo afjaro kuwan oo la siiyo adeeg tayo sare leh oo qiimo jaban isla markaana ah adeeg isku imaatinka kombiyuutarka.
PCBfuture waxay leedahay waayo-aragnimo hodan ah oo soosaarida noocyada hoose iyo hoose-dhexe ee PCB-yada waxayna leeyihiin koox kulan khibrad leh si loo hubiyo isku-darkaaga PCB si dhakhso leh. Our PCPC turnkey jeer hogaanka ay yihiin kuwa ugu gaaban ee warshadaha, ugu dhaqsaha badan waxaan markab ka PCBs wada urursan macaamiisheena in 3 maalmood.
1. Daaweynta PCB-da ugu dhakhsaha badan 24 saac
PCBfuture waxay ganacsi ka bilaabayaan wax soo saarka PCB, waxaan leenahay awoodo PCB xoog leh si aan ula kulano waqtigaaga mashruuca adag. Dhinaca PCB-ga / PCB-ga laba dhinac ah iyo 4 lakab PCB, waxaan si dhakhso leh ugu soo saari karnaa 24 saacadood.
2. Qaybaha elektaroonigga ah ee dhakhso u laalaada
PCBfuture waxay dhiseen xiriiro iskaashi oo adag oo lala yeesho qeybiyeyaasha adduunka caan ka ah sida Digi-Key, Fallaar, Mouse, Avnet, iyo Chip one stop iwm Waxaan sidoo kale dhisey iskaashi istiraatiiji ah oo lala yeelanayo wakiilka koowaad ee soosaarayaasha qeybaha asalka ah. Waxaa intaa dheer, waxaan haynaa qani ku ah qaybo badan oo badanaa la isticmaalo. Taasi waxay hubineysaa inaan diyaarin karno qalab elektaroonig ah oo tayo sare leh qiimaha ugu fiican iyo waqtiga hogaaminta.
3. Adeegyada isku xidhka elektarooniga ee degdegga ah
Adoo adeegsanaya SMT casri ah oo casri ah iyo Mashiinnada godadka, waxaan awood u leenahay inaan si dhakhso leh isugu soo uruurinno noocyada kala duwan ee PCB-yada. Kala duwan oo badan saarayaasha Golaha PCB, waxaan leenahay koox heegan ah iyo khadadka isku imaatinka SMT ee mas'uulka ka ah isku soo wada duubista kumbuyuutarka degdegga ah iyo noocyada amarrada kiniisadda PCB.
Laga soo bilaabo xigashooyin dhaqameed deg deg ah sida shuruudahaaga, wax soo saarka PCB, Waxyaabaha laga helayo, SMT Assembly, DIP Assembly, Tijaabada iyo rarka, u gudub talaabada labaad iyo wixii la mid ah. Waxaan leenahay Kooxda PMC ee damiirka leh inay raacaan nidaamka una hubiyaan inaan uxirin karno looxyada macaamiisha waqtigooda.
Ku saleysan wax soo saarka PCB-ga ee wanaagsan iyo isku-kalsoonida degdegga ah ee ka imanaya taageerada, waxaan kuu ballan qaadi karnaa inaad heli karto adeegyo isku-dhafan oo elektaroonig ah. Waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyno mashaariicda isku dhafka PCB. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan emayl ugu dir service@pcbfuture.com.